बाहुबली-२ को रेकर्ड : एकै दिनमा कमायो ११५ करोड
प्रकाशित मिति : २०७४ बैशाख १६ शनिबार , ६,४९२ पटक हेरिएको
एजेन्सी । शुक्रवार रिलिज भएको चलचित्र 'बाहुबली २ : द कन्क्लूजन' ले पहिले दिनमै बलिउडमा सबैभन्दा ज्यादा कमाउने चलचित्र बनेको छ । ट्रेड एनालिस्ट रमेश बालाका अनुसार चलचित्रका सबै भर्जनले बक्स अफिसमा पहिले दिन ११५ करोड भारतिय रुपैया कलेक्शन गरेको छ । चलचित्रले कलेक्शनको आधारमा बाहुबलीको पहिलो भाग , ‘कबाली ’ र ‘सुल्तान’ भन्दा अगाडि रहेको छ ।
पहिलो दिन चलचित्रको प्रत्येक सेकेण्डमा १२ टिकट अनलाइन बिक्र भएका छन् । भारतिय रुपैया २७० करोडको बजेटमा बनेको चलचित्र बाहुबली-२ पहिले नै नाफामा रहेको छ । चलचित्रले रिलीज हुनु भन्दा पहिले नै थिएट्रिकल राइट्स बेचेर ५०० करोड भारु भन्दा ज्यादा कमाई गरेको छ ।
ट्रेड एनालिस्ट रमेश बालाले शुक्रबार ट्वीट गर्दै 'एस. एस. राजामौलीद्वारा निर्देशित चलचित्र 'बाहुबली २' हिन्दी भर्जनले बक्स अफिसमा पहिले दिन ३८.५ करोड रुपैया कमाएको छ' लेखेका छन् । चलचित्रले आन्ध्रप्रदेश र तेलंगानामा ५३ करोड , कर्नाटकमा १० करोड, तमिलनाडुमा ९ करोड र केरेलामा ४.५ करोड रुफैया कमाएको छ ।
चलचित्र भारतमा ६ हजार ५ सय स्क्रीन्समा रिलिज भएको छ भने संसारभरमा ९ हजार स्क्रीन्समा रिलिज भएको छ ।
लागुपदार्थ दुर्व्यसनी काण्डमा फसे यी 'बाहुबली २' का कलाकार
बलिउडमा पहिलो रेकर्ड, हजार करोडको क्लबमा ‘बाहुबली–२’ !
बाहुबलीका निर्देशकले बनाउने भए महाभारत, मुख्य भुमिकामा अमिताभ बच्चन
करण जौहरले भने - ‘बाहुबली’ निर्देशकको बौद्धिकताको तुलनामा आफ्नो १० प्रतिशत मात्रै
'बाहुबली २' को सेटेलाइट्स राइट्स रेकर्ड ५०० करोड
रिलिज नहुदै रोबर्ट '२.०' ले तोड्यो 'बाहुबली २' को रेकर्ड
युट्युवमा भाइरल भयो 'बाहुबली टु' को ट्रेलर, घण्टामै १४ लाखले हेरे
बाहुबली–२ का दुई सिन रिलिज अगाडि नै लिक, ग्राफिक डिजाइनर पक्राउ
बाहुबली अभिनेत्री तमन्ना आफ्नो शरीरका अंगबारे के भन्छिन् ?